iPod Touch Notes Weghachi: Olee otú iji weghachi Notes on iPod Touch 4
> Resource> iPod> iPod aka Notes Weghachi: Olee otú iji weghachi Notes on iPod aka 4
Enwere m ike weghachi ehichapụ ndetu na m iPod aka?
My obere nwa ehichapụ niile ndetu na m iPod! Ọ dabara nke ọma na m mere ka ihe iTunes ndabere tupu ya ehichapụ ya. M nwere ike nweta ndị ndetu azụ? M maara na m nwere ike inwe ya azụ ya, na-enyere biko !!!!
Ọ bụ n'ezie mkpa na, ugbu a, na ndetu anọwo na-ehichapụ, ị na-adịghị ikwunye gị iPod na, ma ọ bụ dapụtara mmekọrịta ga-eme ka ndabere na iTunes ga-enweta ume ọhụrụ na aga na ndetu ga-efu ruo mgbe ebighị ebi. Iji nweta data azụ gị iTunes ndabere, ọ bụghị ihe ike dị ka ị na-eche. Ọ bụ ezie na ị na-agaghị ekwe ka nweta ma ọ bụ na-ele ọdịnaya nke gị iTunes ndabere, na ị ga-enye elu gị niile ugbu a data na gị iPod aka iji weghachi gara aga data, na a kwesịrị ekwesị mgbake ngwá ọrụ, ị nwere ike mfe wepụ ọdịnaya nke gị iTunes na nkwado ma weghachite ndetu gị iPod aka.
The software nke pụrụ inyere gị: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery).
Ha abụọ eme ka i nwee wepụ iTunes nkwado ndabere na mpaghara selectively weghachi ndetu na gị iPod aka na 2 nzọụkwụ. Ihe bụ ihe ọzọ, Wondershare Dr.Fone maka iOS-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data gị iPod aka 4, mgbe ị na-tọrọ atọ na-enweghị ndabere. Ya mere, anaghị eji gị iPod aka ọzọ mgbe ị na-efu dị mkpa data na ya ruo mgbe ị na hụrụ ha azụ, furu efu data ga-overwritten site ọhụrụ otu kere site ọ bụla ọrụ na gị iPod.
Download free ikpe version n'okpuru naghachi gị furu efu ndetu. Ma nsụgharị eme ka i nwee wepụ iTunes ndabere. Gbalịa ya maka free!
Olee otú iji weghachi ndetu na iPod aka na 2 ụzọ
Ọzọ, ka ego otú naghachi ndetu site ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị ma ọ adịrị iTunes na nkwado ndabere na zuru ezu nzọụkwụ.
Nkebi nke 1: Weghachi iPod aka ndetu si iTunes ndabere
Nkebi nke 2: Kpọmkwem iṅomi ma weghachi ndetu na iPod aka 4
Nkebi nke 1: Weghachi ndetu na iPod si iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1: Họrọ gị iPod aka ndabere ka ike iṅomi
Ugbu a, ka na-Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ihe atụ.
Ọkụ ruo usoro ihe omume gị na Mac mgbe wụnye, na-aga na "naputa site na iTunes ndabere File" nhọrọ n'elu nke isi interface. Mgbe ahụ ị ga-esi a yiri window dị ka ndị na na-arụ otu nzọụkwụ dị ka ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Preview na weghachite ndetu na iPod aka 4
Mgbe Doppler, niile data ẹdude ke iTunes ndabere ga-amịpụtara na-egosipụta na haziri edemede dị ka igwefoto mpịakọta, foto iyi, kọntaktị, ozi, wdg Ka weghachi gị iPod aka ndetu, ego na udi nke "Notes", ebe i nwere ike ịhụchalụ niile zuru ezu ọdịnaya otu otu. akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" button n'elu ịzọpụta gị ndetu na Mac. Ugbu a, ị na-na na ọma weghachiri eweghachi ndetu na gị iPod aka 4.
Nkebi nke 2: Kpọmkwem iṅomi ma weghachi ndetu si iPod aka 4
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ndabere ma ọ bụ emeghị mmekọrịta gị iPod aka na iTunes-adịbeghị anya, otú a nwere ike ịbụ ihe kasị mma otu maka gị.
Nzọụkwụ 1: Jikọọ iPhone na kọmputa
Na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) na kọmputa gị na jikọọ gị iPod aka. Mgbe ngwaọrụ gị achọpụtara, na windo nke usoro ihe omume ga-adị ka ndị na. Ime ka nzọụkwụ ọzọ na-akwadebe-esi banye scanning mode.
Nzọụkwụ 2: Tinye scanning mode na ike iṅomi gị iPod maka ndetu weghachi
Soro nzọụkwụ n'okpuru-esi banye scanning mode na gị iPod:
Jide ngwaọrụ gị na pịa "Malite" bọtịnụ.
Na ịpị "Ike" na "Home" buttons n'out oge maka 10 sekọnd.
Mgbe 10 sekọnd, hapụ "Ike" button, ma ịnọgide na-ejide "Home" ọzọ 10 sekọnd.
Mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi gị iPod aka furu efu ndetu. Ọrụ gị na-echere ọgwụgwụ nke iṅomi.
Nzọụkwụ 3: Preview na weghachite ndetu furu efu si iPod aka
Dị nnọọ ka iṅomi N'ihi ke akpa mgbake ụzọ, ị nwere ike ihuchalu zuru ezu ọdịnaya nke niile data na ị na-ahụ. N'ihi na ndetu, gaa na "Notes" nhọrọ na ego ha otu otu. Họrọ ndị ị chọrọ na akara ha. Pịa "Naghachi" button n'elu na-azọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Cheta na: Data ịchọta ebe a na-agụnye ehichapụ data na ndị ka na-na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị azụ gị ehichapụ n'anya, ị nwere ike nụchaa Doppler N'ihi site na iji slide bọtịnụ na ala na naanị ngosi ehichapụ ihe.
2 Free iPod ka PC Nyefee Ngwaọrụ
Otú e si etinye Audiobooks on iPod
Otú nyefee iPod ka New Computer